पार्टी एकता घोषणा गर्दा किन भक्कानिए प्रचण्ड ? बोल्न सकेनन् गाला अबरुद्ध भएपछि… « Light Nepal
पार्टी एकता घोषणा गर्दा किन भक्कानिए प्रचण्ड ? बोल्न सकेनन् गाला अबरुद्ध भएपछि…
Published On : 17 May, 2018 8:04 pm
काठमाडौ – एमाले र माओवादी केन्द्रले मिलेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ बनेको घोषणा गर्दा भने प्रचण्ड निकै भावुक बने । पुनर्गठित पार्टीका दुईअध्यक्ष मध्येका एक प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने क्रममा पटक पटक उनको गला अवरुद्ध भयो ।
एकता सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई शब्दको दुःख भएको प्रचण्डले बताए ।
आफूले कमजोरी गर्दा देश र जनताले दुःख पाउने र राम्रो निर्णय गर्दा देश अघि बढ्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले एमाले र माओवादीको एकता ‘महान छलाङ’ भएको बताए ।
प्रचण्डले अहिले नेताहरु सांसद र मन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको बताएका छन् । नेकपाको एकता घोषणासभा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने ‘पहिला पहिला नेताहरु मर्ने लडाइँमा म पहिला जान पाउ भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो तर अहिले सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।’ यति भनिरहँदा प्रचण्डको गला अबरूद्द भएर भक्कानिएका थिए ।
प्रचण्डले अब देशमा नयाँ सुगको सुरुवात भएको बताएका छन् । आफूहरुको उद्देश्य जनतालाई खुसी र राष्ट्रलाई सुदृद्ध बनाउने रहेको भन्दै भविष्यमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समद्धिद्वारा देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने भएको पनि बताए । अस्थिरता र अराजकताको युग समाप्त भई आर्थिक समृद्धिको युग सुरुवात भएको पनि बताए ।
पार्टी एकता हुँदै गर्दा कसरी एकतालाई अभिव्यक्त गर्ने भन्नेमा शब्दको दुख भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले विश्वलाई नै स्थिरता, विकास र सुशासनको सन्देश दिन एकता अर्थपूर्ण र बहुआयामिक भएको बताए ।
उनले आम जनभावनाअनुसार एमाले र माओवादी एकजुट भएको पनि बताए । जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दिएको योगदानको स्मरण गर्दै उनकै स्मृति दिवसका दिन एकता घोषणा गरिएको पनि उनको भनाई थियो ।
उनले अस्थिरता र अराजकताको युग समाप्त भई आर्थिक समृद्धिको युग शुरुवात भएको बताए । गएको चुनाब ताका आफूले बाँकी जीवन सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन खर्चिने बताएको स्मरण गर्दै त्यो बाचा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
विगतमा कपिपयले पार्टी एकताको विषयमा आशंका व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले ती आशंकालाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको पनि प्रचण्डले बताए ।
प्रचण्डले एकताका लागि पछाडि फर्किने पुल भत्काएर आएको पनि सो क्रममा बताए । उनले एकतामा साथ दिने आम कार्यकर्तालाई बधाई दिँदै आफूहरुको संकल्प पूरा भएको पनि बताए ।
अचानक स्वास्थ्यमा गडबडी भएपछि कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, चैत ८ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अस्पताल भर्ना भएका छन्। अचानक स्वास्थ्यमा
फोरम राजपा एकिकरण हुँदै : फोरमसँग एकता गर्न राजपाले बनायो समिति
काठमाडौं, ८ चैत । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकिकरणको तयारी गरेका
‘विज्ञानकै कारण अरुको मिर्गौला लिएर चलेको मान्छे मै हुँ’ :प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल मगन्ते देश नभएको बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, चैत ९ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अस्पताल भर्ना भएका छन्। मन्त्री पोखरेल फुड प्वाइजन
अचानक स्वास्थ्यमा गडबडी भएपछि कांग्रेसका नेता
कपिलवस्तुमा आगलागी, १५ घर जलेर नष्ट
फोरम राजपा एकिकरण हुँदै : फोरमसँग
कांग्रेस नेता सिटौला आईसीयूमा भर्ना
शिल्पा पोखरेलकाे “लजाउछौ मात्रै” अत्यन्तै पुरानाे